Ny lasa - Ny mandidy - Ny hoavy
Zava-droa loha no hohalalinintsika amin’ity Lesona ity, dia:
Ny Lasa sy ny Fomba Fiforonany.
Ny Filàza Mandidy sy ny Fomba Fiforonany.
1.- Ny Lasa sy ny Fomba Fiforonany:
Ny Foto-teny iray amin’ny “Matoanteny”, dia:
i)- Manambara hatrany ny “Lasa” eo amin’ny Fitanisàna Matoanteny iray.
ii)- Manambara ny “Mpisolotena Fahatelo” sokajy “Lahy Samirery” amiireo endrika fito momba ny “Lasa”.
Mba hahazoana manasongadina ireo Mpisolotena hafa, dia:
i)- Fantarina tsar any Foto-teny manambara ny “Mpisoloteba Fahatelo” amin’ny “Lasa”
ii)- Avy amin’ny fahafantarana izany, no hahazoa-manampy ny “Tovan’ny Mpisolo-tena” sisa amin’ny Foto-teny
Afa-tsy ny “Mpisolotena Fahatelo”, dia mitovy avokoa ny “Vanin-teny” roa farany amin’ny
“Lasa” rehetra . Aoka horaisintsika ho ohatra ny Matoanteny : קשר Qâshar .
Fisehoana mihatra amin’ny olona roa no hita amin’izany eto , dia IZY sy IZAHO.
Qâl : Avy amin’ny קשר Qâshar = Namatotra ( ahy ) Izy , dia ahazoana קשרתי Qâshar’thiy = Namatotra ( azy ) Aho.
Niph’al : Avy amin’ny נקשר Niq’shar = Voafatotra Izy = Nofatorana Izy , dia ahazoana נקשרתי Niq’shar’thiy = Voafatotra Aho = Nofatorana Aho
Pi’el : Avy amin’ny קשר Qisher = Namatotra ( ahy ) Mafy Izy = Voa-fatotra mafy Aho , dia ahazoana קשרתי Qishar’thiy = Namatotra mafy Aho = Nofatorako Mafy dia Mafy Izy.
Pu’al : Avy amin’ny קשר Qoushar = Voafatotra Mafy Be Izy = Nofatorana Mafy dia Mafy Izy , dia ahazoana קשרתי Qoushar’thiy = Voafatotra Mafy Be Aho = Nofatorana Mafy dia Mafy Aho .
Hiph’il : Avy amin’ny הקשיר Hiq’shiyr = Nampamatotra ( ahy ) Izy = Nampamatoriny ( aho ). dia ahazoana הקשרתי Hiq’shar’thiy = Nampamatotra ( azy ) Aho = Nampamatoriko ( izy ) .
Hoph’al : Avy amin’ny הקשר Hôq’shar = Nampamatorina Izy = Naniraka Olona Hamatotra Azy Aho , dia ahazoana הקשרתי Hôq’shar’thiy = Nampamatorina Aho = Naniraka Olona Hamatotra Ahy Izy.
Hith’pa’el: Avy amin’ny התקשר Hith’qasher = Namatotena Izy = Nanao Tadimody ny Tenany Izy , dia ahazoana התקשרתי Hith’qashar’thiy = Namatotena Aho = Nanao Tadimody ny Tenako Aho.
2.- Ny Filàza Mandidy sy ny Fiforonany:
Avy amin’ny Fanafoanana ny “Tovan’ny Mpisolotena Faharoa” amin’ny “Ho Avy” - izay
mbola hodinihintsaka misimisy kokoa amin’ny Lesona manaraka ny “Ho Avy” - kosa , no manomboka miforona ny “Filàza Mandidy” . Misy “Endrika Fito” no handinihantsika azy, ka handraisana ohatra handalinana azy ny “Matoanteny” קשר Qâshar = Mamatotra , efa nataontsika ohatra teo aloha teo:
Qâl : Amin’ity Endrika Voalohany ity, rehefa esorina ny ת Thav amin’ity תקשר Thiq’shor = Hamatotra ( azy ) ‘Ianao , dia ny קשר Q’shor = Afatory . Io sisa tafajanona io izany no “Filàza Mandidy”.
Niph’al : Amin’ity Endrika Faharoa ity , rehefa esorina ת Thav, dia tsy Maintsy soloina ה Heiy , mariky ny « Filàza Mandidy.
Ka tsy תקשר Thiqâsher = Hafatotra ‘Ianao , no izy , fa הקשר = Hiqâsher = Aoka Ho Voafatotra ‘Ianao = Ho Voafatotra Anie ‘Ianao .
Izany hoe: Manana endri-teny “Maniry” na “Mirary” ny hahavoa ny hafa.
Pi’el : Amin’ity Endrika Fahatelo ity, rehefa esorina ny ת Thav, mariky ny Mpisolotena Faharoan’ny Ho Avy : תקשר Th’qasher = Hamatotra ( olona ) Mafy ‘Ianao , dia ny קשר Qasher = Afatory Mafy , no sisa tafajanona..
Pu’al : Amin’ity Endrika Fahefatra ity, dia tsy misy ny « Filàza Mandidy ».
Hiph’il : Amin’ny Endrika Fahadimy, dia miseho indray ny ה Heiy , izay niendaka teo amin’ny toerany, noho ny fisian’ny « Tovona ». Ankoatr’izany dia ny Zana-tsoratra “Tsérey” indray no miasa, fa tsy ny “Zana-tsoratra Tsofoka” י iY . Izany hoe, tsy io י iY indray no izy, fa ny « Tséreiy »
Ohatra : Avy amin’ny תקשיר Thaq’shiyr = Hampamatory ! , diaahazoana ny הקשר Haq’sher = Hampamatotra ‘Ianao = ‘Ianao no Manome Baiko Hampamatotra Olona.
Hoph’al : Toy ny teo amin’ny Endrika Fahefatra, dia tsy misy eto amin’ity Endrika Fahenina ity koa ny « Filàza Mandidy ».
Hith’pa’el: Toy ny tamin’ny Endrika Fahadimy, dia miseho eto amin’ity Endrika Fahafito ity indray ny ה Héiy , izay niendaka teo amin’ny toerany, noho Ny fisian’ny « Tovona » .
Ohatra : Amin’ny תתקשר Thith’qasher = Mamatora Tena ‘Ianao , dia ahazoana ny התקשר Hith’qasher = Hamatotena ‘Ianao = Hanao
Tadimody Ny Tenanao ‘Ianao = Manaova Tadimody ny Tenanao ‘Ianao.
Raha ny Rafi-teny manaraka ny Fitsipi-pitenenana no heverina, dia tokony ho קשר Qâsher
no « Filàza Mandidy » amin’ny « Hiph’il ». Kanefa noho ny Teny iray tsy afaka hanomboka velively amin’ny « Dâguesh Mafy”, dia voatery tsy maintsy atovona eo amin’ny Foto-teny ny “Tovona” ה
Hiy , raha tsy ohatra angaha ka efa ה Héiy rahateo ny fiantombohan’ny Teny amin’ny Niph’al.
1.- Teny Miditra :
Misy hevitra vitsivitsy mila Fanazavana mialoha ataontsika :
i)- Amin’ny « Ho Avy », ny “Mpisolotena” rehetra, dia miseho amin’ny endrika “Tovona” ,
ka mitovy tanteraka amin’ny Teny Mahaleotena iray, noho izy nalaina avy amin’ny “Mpisolo” . Tsy
miova velively izany toetra amin’ny maha-“Mpisolotena” azy izany.
ii)- Afa-tsy amin’ny “Mpisolotena Voalohany” rehetra, dia mitovy avokoa ny “Tovona” , na
“Filàza Samirery” izany na “Filàza-Maro”.
iii)- Raha mifanohitohy be ihany amin’ny Teny iray ny Reni-soratra mitovy, dia tsy maintsy
asiana “Tovana” izy, mba:
Hanavahana ny “Sokajy Lahy” amin’ny “Sokajy Vavy”.
Ary mba hanavahana koa ny “Samirery” amin’ny Filàza-Maro”.
iv)- Ireto avy ireo “Tovana” iombonana amin’ny endrika Fiton’ny “Ho Avy”:
Ny י iY , no manavaka ny « Mpisolotena Faharoa » amin’ny Sokajy Vavy « Samirery »,
Ary ny « Mpisolotena Faharoa » amin’ny Sokajy “Lahy Samirery”.
Ny ו Ou , no manavaka ny « Mpisolotena Faharoa sy Fahatelo » , amin’ny Sokajy Lahy « Filàza-Maro » , ary ny « Mpisolotena Faharoa sy Fahatelo » amin’ny Sokajy Lahy « Samirery ».
Ny נה Nâh na Nôh , no manavaka ny “Mpisolotena Faharoa sy Fahatelo” amin’ny Sokajy “Vavy Filàza-Maro”, ary ny “Mpisolotena Faharoa sy Fahatelo” amin’ny Sokajy “Vavy Samirery”.
v)- Tena tsara Fitadidy ireto zava-droa loha ireto:
Mitovy ny « Mpisolotena Faharoa » amin’ny Sokajy « Lahy » sy ny « Mpisolotena Fahatelo » amin’ny Sokajy « Vavy » rehefa « Samirery » izy.
Mitovy toy izany koa ny « Mpisolotena Faharoa » sy ny « Mpisolotena Fahatelo » amin’ny sokajy « Vavy » rehefa « Filàza-Maro » izy.
vi)- Tsara Raketina ireto « Tovona » sy « Tovana » amin’ny « Ho Avy » ireto :
FILAZA SAMIRERY FILAZA MARO
Tovana Tovona Fitanisana Tovana Tovona Fitanisana
- א Izaho - נ Isika - Izahay
- ת ‘Ianao (L) ו ת ‘Ianareo (L)
י ת ‘Ianao (V) נה ת ‘Ianareo (V)
- י Izy (L) ו י Izy Ireo (L)
- ת Izy (V) נה ת Izy Ireo (V)
2.- Famakafakana :
Raha ny « Fitsipi-pitenenana Hebreo » no heverina, dia tokony ho « Sêva” hatrany ny Zana-tsoratra amin’ny « Tovon’ny Ho Avy rehetra amin’ireo Endrika Fiton’ny Matoanteny. Hodinhintsika tsirairay ireo, ka « Endrika » efatra no fomba hamakafakantsika azy :
21.- Endrika Voalohany :
i)- Mpanao = Qâl :
Amin’ny « Mpanao », ny « Shêva » izay miaraka amin’ny « Tovona », dia tsy maintsy arahin’ ny « Shêva » hafa ihany koa.
Ohatra : Ny אקשר ‘Eq’shor , dia miova ho אקשר Êq’shor = Hafatotro = Feheziko.
Ny תקשר Th’qeshor , dia miova ho תקשר Thiq’shor = Hamatotra ‘Ianao.
ii)- Iharana = Niph’al :
Amin’ny “Iharana” kosa, dia tsy maintsy arahin’ny “Dâguesh” ny “Shêva” . Ny “Dâguesh” mantsy no misolo toerana ny נ Noun na Nun izay niendaka.
Ohatra : Ny אנקשר ‘En’qasher , dia miova ho אקשר ‘Êqâsher = Hovoafatotra Aho.
Ankoatr’izany, ny « Shêva » eo amin’ny « Tovona », dia miova ho « Hîrik » amin’ny Mpiisolotena rehetra, afa-tsy amin’ny Mpisolotna Voalohany Samirery.
Ohatra : Ny תנקשר Th’neqâsher , dia miova ho תקשר Thiqâsher = Hovoafatotra ‘Ianao.
Arak’ireo Fisehoana samihafa hitantsika teo ireo, dia tokony homarihina tsara ireto :
Tsy maintsy ho “Sêgôl” hatrany no miara-dia amin’ny א ‘Aleph eo amin’ny Endrika Voalohany = Qâl , sy ny Endrika Faharoa = Niph’al , fa tsy “Shêva” tsy akory.
Ny “Hîrik” hita eo amin’ny “Tovona” kosa, no mampiavaka manokana ny “Ho Avy” amin’ny Endrika Voalohany = Qâl sy ny Endrika Faharoa = Niph’al.
22.-Endrika Faharoa :
i)- Fanazavana Mialoha :
Raha tsy arahin’ny « Shêva » hafa ny « Shêva » amin’ny Tovona, dia maharitra tsy miova na tsy mihetsika izy. Ohatra :
אקשר ‘Aqasher = Hafatotro Mafy = Hofeheziko Mafy .
תקשר Th’qasher = Hafatotrao Mafy = Hofehezinao Mafy.
אקשר ‘Aqoushar = Hovoafatotra Mafy Aho = Hovoagadra Mafy Aho.
תקשר Th’qoushar = Hovoafatotra Mafy ‘Ianao = Hovoagadra Mafy ‘Ianao.
ii)- Tsiahy :
Ny « Shêva » eo amin’ny « Tovona » no mampiavaka manokana ny « Ho Avy » amin’ny Endrika « Pi’el » sy ny Endrika « Pu’al ».
Noho ny fisian’ny א ‘Aleph , dia voatery tsy maintsy miampy « Patah » amin’ny Mpisolotena Voalohany Samirery .
23.- Endrika Fahatelo :
i)- Mpampanao ny Asa = Hiph’il :
Amin’ny Mpampanao = Hiph’il , momba ny “Ho Avy”, dia miova ho “Patah” ny “Shêva” amin’ny “Tovona”, raha toa ka arahin’ny “Shêva” hafa izy.
Ohatra: Ny אקשיר ‘Eq’shiyr , dia miova ho אקשיר ‘Aq’shir=Hampamatotra ( azy ) Aho.
Ny תקשיר Theq’shiyr, dia miova ho תקשירThaq’shiyr= Hampamatotra ( ahy ) ‘Ianao.
ii)- Iharan’ny Fampanaovana = Hoph’al :
Amin’ny Iharan’ny Fampanaovana = Hoph’al kosa , dia miova ho “Qâmets” ny “Shêva” amin’ny “Tovona”, raha toa ka arahin’ny “Shêva” hafa izy.
Ohatra: Ny אקשר ‘Eq’shar , dia miova ho אקשר ‘Ôq’shar = Hampamatorina Aho.
Ny תקשר Theq’shar , dia miova ho תקשר Thiq’shar = Hampamatorina ‘Ianao.
iii)- Tsiahy :
Tsara hotsahivintsika eto indray, fa ny Matoanteny Manara-drafitra, dia toy izao ny Fisehony:
Ny “Patah” miaraka amin’ny “Tovona”, no mampiavaka ny “Ho Avy” amin’ny Endrika “Hiph’il”.
Ary ny “Qâmets” kosa, no mampiavaka ny “Ho Avy” amin’ny Endrika “Hoph’al”.
24.- Endrika Mahavoatena:
i)- Hith’pa’el :
Amin’ny Fisehoana “Mahavoatena”, indrindra raha mahakasika ny “Mpisolotena Voalohany”,dia miova ho “Sêgôl” ny “Shêva” amin’ny “Tovona”, raha arahin’ny “Shêva” hafa izy. Ny antony, dia noho ny fisian’ny א ‘Aleph , natovona amin’ny “Foto-teny” iray.
Ohatra : Ny אתקשר ‘Eth’qasher , dia miova ho אתקשר ‘Êth’qasher = Hamato-tena Aho = Hanao Tadimody ny Tenako Aho.
Fa ivelan’ny “Mpisolotena Voalohany”, amin’ny “Mpisolotena Sisa Rehetra” ,dia miova ho “Hîrik” kosa ny “Shêva” amin’ny “Tovona”, raha arahin’ny “Shêva” hafa izy
Ohatra: Ny תתקשר Theth’qasher , dia miova ho תתקשר Thith’qasher = Hamato- Tena ‘Ianao = Hanao Tadimody ny Tenanao ‘Ianao.